Sheekada Jaceyl 7 Lamaane Bollywood Ah Oo Waqti Dheer Wada Noola (+Sawiro)
src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”> Jilaayaaasha Bollywood-ka ka tirsan badanaa way is fahmaan xiriiro kala duwan ayay sameystaan kuwa isku fahmo saaxiibtinimo iyo kuwa kale oo xiriir jaceyl wada
Waa Lisku Yimid Sridevi , Rekha, Shabana, Rani, Vidya Iyo Aishwarya Oo Xaflad Qaas Ah Loo Qabtay (+Sawiro)
Waxaan wada kulmay qaar ka mid ah atiriishooyinka ugu caansan ee Bollywood-ka Rekha, Sridevi, Shabana Azmi, Aishwarya Rai Bachchan, Rani Mukerji, Vidya Balan, Iyo Tina
Super Star Akshay Kumar Wuxuu Box-officeka Ku Garaacay SRK Balse Wey Ku Adagtahay Sallu Inuu Garaaco!!
Super Star Akshay Kumar markaan asiga ayee maqaayada ushidantahay wuxuuna sanadadan dambe joogto ka dhigtay inuu sameyoo ugu yaraan 2 Filim oo Hit Dhamestiran. xidigaan filimkiisa udambeyay kaaso tiyaatarada saaran ayaa ...
Lakulan Alia Bhatt, Disha Patania, Esha Gupta Iyo Xidigo kale Oo Dharka Dhigteen (+Sawiro)
Interntka waa aalad ay dadka kuwada kulmaan sido kalena aqbaaraadka lagala socdo, hadaba waxaa jiraan xidigo ayaga soo bandhiga had iyo jeer jirkooda kuwaaso dunida caan ka ah. haba usoo bandhigaan ...
Suniel Shetty Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Uu Filimka Bachchan Singh Ee Abhishek Hogaamiye Ka Yahay U Maal Galinaayo
Suniel Shetty oo loogu yeero walaalka Bollywood-ka (Anna of Bollywood) ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay filimka Bachchan Singh ee uu soo saarayaasha ka mid yahay. Filimka Bachchan Singh waxaa hogaamiye ka ah ...
Sooraj Pancholi Oo Sinta Ka Dhaawacmay Xili Tababar Kaarateega Uu Ku Guda Jiray
Jilaaga dhalinta yar Sooraj Pancholi ee uu aabo u yahay ruug cadaa Aditya Pancholi waxaa soo gaaray dhaawac dhanka sinta ah xili uu tababar dhanka kaarateega ku guda jiray. Sooraj wuxuu ...
Kareena Kapoor Oo Bilaawday Isku Diyaarinta Filimkeeda Veere Di Wedding (+Sawiro)
Atirishada caanka ah Kareena Kapoor Khan ayaa bilaawday isku diyaarinta filimkeeda cusub Veere Di Wedding waxayna kulan la qaadatay gabadha maal galineyso Rhea Kapoor. Tan iyo sanadii 2015 ayay soo bilaabatay sameynta Veere ...
Anushka Sharma Iyo Jeceylkeeda Virat Kohli Oo Dalxiis U Joogaan Dalka Sri Lanka
Atirishada caanka ah Anushka Sharma oo shaqada ka nasaneyso waxay dalxiis u aaday iyada iyo jaceylkeeda Virat Kohli dalka Sri Lank. Virat Kohli waa kabtanka xulka Hindiya cayaarta Cricket-ka sidoo kalena isagana ...
La Kulan Super Star Mithun Chakraborty Gabadhiisa Dishani Chakraborty (+Sawiro)
Jiil cusub ayaa diyaar u ah inay Bollywood-ka hogaankiisa la wareegaan mid walbana nasiibkiisa ayaa ka horeeyo halka uu gaari karo. Hadaba waxaan idiin heynaa macluumaad iyo sawiro u gaar ah ...
Siddharth Malhotra Oo Beeniyay Inay Alia Bhatt Kala Hareen!
Dhawaan warbaahinta Hindiya waxay sheegtay in lamaanaha dhalinta yar Siddharth Malhotra iyo Alia Bhatt kala hareen sidoo kalena mashruucii Aashique 3 aoo ay isla sameyn lahaayeen meesha ka baxay. Siddharth Malhotra ...